गुगल एनालिटिक्स स्प्याम र ndash मा Semalt विशेषज्ञ ले लो! यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ?
गुगल एनालिटिक्स स्प्याम र रेफरल स्प्याम अनलाइन प्लेटफार्महरूमा काम गर्ने व्यवसायहरूको वास्तविक वास्तविक खतराहरू छन्। स्प्यामरहरुले वेबसाइटहरु मार्फत आफ्नो वेबसाइटहरु भ्रमण गरेर मैलवेयर साइटहरु लाई ट्राफिक चलाउन वेबसाइट मालिकहरुको फायदा लिदै आएको छ। डिजिटल मार्केटिंग , फर्महरू र संस्थाहरूमा बाँच्नको लागि उनीहरूको वेबसाइट रिपोर्टबाट सबै नकली आगन्तुकहरू सफा गरिनुपर्छ। मैलवेयर, ट्राजान भाइरस र गुगल एनालिटिक्स स्प्यामसँग व्यवहार गर्दा यो सामान्यतया चित्रण गरिएको भन्दा कम छ।
भूत रेफरललाई स्प्याम, गैर-भूत रेफरल स्प्याम, र गुगल एनालिटिक्स स्प्यामबाट हटाउन फिल्टरहरू सिर्जना गर्दै र तपाईंको रिपोर्टबाट सबै खराब फाइलहरू र डेटा हटाउन सतर्क हुनु। ग्राहकहरू मालवेयर र स्पाम सजिलैबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्न थुप्रै उपकरणहरू राखिएका छन्।
इगोर Gamanenko, सेल्टल्ट को अग्रणी विशेषज्ञहरु मध्ये एक छ, तपाईंको रिपोर्टबाट Google Analytics स्प्याम हटाउन कसरी दिशानिर्देश परिभाषित गर्दछ।
1। Google एनालिटिक्सका धेरै हेराइहरू सेट गर्दै
दुई अतिरिक्त गुगल एनालिटिक्स दृश्यहरू सिर्जना गर्न कम्तिमा कम्तिमा तीन हेराइहरू। नयाँ गुगल एनालिटिक्स एक दृश्य समावेश छ, जुन प्रायः डिफल्ट द्वारा स्थापित गरिएको छ। तपाईंको परिवर्तनको ब्याकअप प्लान हुनुको लागि समर्थन गरिएको छ किनकि नयाँ परिवर्तनहरू लागू गरे पछि तपाईंको डेटा प्रभावित हुन्छ।
तपाईंको पूर्वनिर्धारित दृश्य तपाईंको मुख्य दृश्य बनाउनको लागि बनाउनुहोस्। Google Analytics स्प्याम, ट्रोजन भाइरस, र मैलवेयर खतराहरू हटाउन र हटाउनको लागि यस दृश्यमा सबै वेबसाइट डाटाको नामकरण गर्नुहोस्। अतिरिक्त सिर्जना गरिएका हेराइहरूमा परीक्षण दृश्य र कच्चा दृश्य समावेश हुनुपर्छ। आफ्नो कच्चा दृश्य बिना कुनै पनि फिल्टर वा परिवर्तनहरू सेट अप गर्नुहोस्, र तपाईंको दृश्यले पूर्वनिर्धारित दृश्यमा भिन्नताहरू बनाउन अघि आफ्नो वेबसाइटमा गरिएका परिवर्तनहरू परीक्षण गर्न तपाईँको दृश्य।
2। मान्य होस्टनामहरू मार्फत स्प्याम पत्ता लगाउनुहोस्
होस्टनामहरूमार्फत Google एनालिटिकल स्प्याम पत्ता लगाउन सजिलो तरिका हो। होस्टनामले तपाइँको वेबसाइटको नामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। नक्कली रिपोर्टहरू फिल्टर गर्न, तपाईंको रिपोर्टमा legitim होस्टनाम समावेश गर्नुहोस्। तर, यो वास्तविक ट्राफिक फिल्टर गर्नबाट टाढाको लागि यो सल्लाह छ कि यसले तपाईको वेबसाइट प्रगतिलाई नकारात्मक असर पार्छ।
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स दृश्यमा अर्को फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस् जुन ट्राफिक समावेश गरिएको होस्ट गरिएको नामहरूमा। तपाईंको परीक्षण दृश्य कार्यान्वयन गरेर सुरू गर्नुहोस् र यसलाई पाँच दिन भन्दा बढीको लागि चलाउन दिनुहोस्। जाली ट्राफिकफिल्टर फिल्टर गर्दै गर्दा डाटा त्यहि नै रहेको छ भन्ने कुराको लागि लेनदेनको जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको मुख्य दृश्यमा अर्को फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस् र फिल्टरमा सबै मान्य डोमेन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
3। भूत रेफरल स्प्याम फिल्टर गर्नुहोस्
तपाईको Google Analytics रिपोर्ट को अधिकांश भूत रेफरल स्पैम र अन्य मैलवेयर शामिल छ। नकली आगन्तुकहरू तपाईंको वेबसाइटमा पठाउन स्प्रेड कार्यहरू पठाउनुहोस्। तपाईंको रिपोर्टबाट सन्दर्भ स्प्याम फिल्टर गर्न, दुई फिल्टरहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको सूचीमा पाइने सबै भूत रेफरल थप्नुहोस्। यो कसरी काम गर्ने जाँच गर्न को लागी तपाईंको परीक्षण दृश्यको साथ सुरू गर्नुहोस् र त्यसपछि मुख्य फिल्टर लागू गर्नुहोस्।
4। बोट बहिष्करण
गुगल एनालिटिक्सहरू प्रविधिहरूमा काम गरिरहेका छन् जुन सबै ज्ञात बटहरू स्वचालित रूपमा तपाईंको प्रतिवेदनबाट हटाइनेछ। बोटहरू फिल्टर गर्न परीक्षण दृश्य र मुख्य दृश्य सिर्जना गर्नुहोस्।
5। स्प्यामलाई फिल्टर गर्न खण्ड उत्पन्न गर्नुहोस्
मैलवेयर र ट्राजान भाइरस उनीहरु आफ्नो वेबसाइटमा प्रवेश गर्दा धेरै चिन्ता हुन सक्छन्। नयाँ फिल्टरहरू उत्पन्न गर्नुहोस् जसले सबैका ज्ञात भूत रेफरल स्प्यामलाई तपाइँको सक्रिय डेटाबाट बहिष्कार गर्नेछ। तपाईंको इतिहास जाँच गर्न खण्ड सिर्जना गर्नुहोस् र सबै भूत रेफरल स्प्याम बहिष्कार गर्नुहोस् तपाईंको डेटाबाट।
रेफरल स्प्याम र गुगल एनालिटिक्स स्प्याम वेबसाइट मालिकहरूको लागि वास्तविक खतरा हो। रेफरल स्प्याम वास्तविक वेबसाईटहरूमा नकली ट्राफिक उत्पन्न गर्दै एक मात्र लक्ष्यको साथ संलग्नता र वास्तविक यातायातमा उनीहरूको खराब वेबसाइटहरूमा। ट्रोजन र मालवेयर जस्तै भाइरस प्राय: स्प्यामरहरूले वास्तविक ट्राफिक सिर्जना गर्न प्रयोग गरेको छ। तपाईंको रिपोर्टबाट रेफरल स्प्याम र Google Analytics स्प्याम बहिष्कार गर्न माथि हाइलाइट गरिएको चरणहरू पछ्याउनुहोस्।
. Source - gold betting casino bonus code